lahatsoratra 92 682 amin’ny teny malagasy
I Persia dia fanjakana tany Atsinanana-Akaiky, teo anelanelan'ny Ranomasina Kaspiana sy ny Helodrano Persika, ary mifanandrify amin'i Iràna ankehitriny. Ny mponina tao no atao hoe Persiana. Tamin'ny taona 1935 i Persia dia novana anarana ho Iràna. Maro ireo fanjakan-dehibe (empira) nifandimby tao Persia hatramin'ny Media ka hatramin'ny an'ny Persiana. Nahatratra ny fara tampon'ny lazany i Persia tamin'ny fanapahan'ireo Akemenida.
Ireto ireo fanjakana sy ny fianakaviana nanjaka nanapaka an'i Persia:
Empira helenistika (330-124 tal. J.K.)
Alarobia, 15 janoary 2020
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Alarobia 15 janoary ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.